ဝေါ်လေဒေသမှာ မနေ့က ဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း စစ်အစိုးရတပ်တွေဖက်က ထိခိုက်ကျဆုံးမှု များသလို ဒီကေဘီအေဘက်ကလည်း တဦးသေဆုံးပြီး၊ ၅ ဦးဒဏ်ရာ ရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်အစိုးရဖက်က တပ်အင်အားတွေ ထပ်မံဖြည့်တင်းနေပြီး၊ နောက်ရက်တွေမှာလည်း တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဦးမဲ့ အခြေအနေ ရှိတယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ်က ပြောပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အတွင်းမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်တွေက ရိက္ခာ သယ်ယူရေးအတွက် ဒေသခံရွာသားတွေကို အဓမ္မ ပေါ်တာဆွဲနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မာနယ်ပလောဒေသ ဆင်ဖြူတောင်စခန်း အခြေစိုက် ခမရ ၃၃၈ က လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အတွင်း ဝိုင်းတော်၊ ကွန်းဒေါ၊ ကြာအင်း၊ ဝါးဂုတ်တော စတဲ့ ကျေးရွာတွေက ရွာသား ၂၀၀ ကျော်ကို အခု ရက်ပိုင်းအတွင်း မလိုက်မနေရ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ပေါ်တာဆွဲသွားခဲ့တယ်လို့ ကေအန်ယူ ဘားအံ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဖဒိုစောအောင်မော်ဧက ပြောပါတယ်။
This entry was posted on December 21, 2010 at 12:13 pm and is filed under အပစ်ရပ် အဖွဲ့များ သတင်း, ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.